Kushiswe izimboni kubhikisha umphakathi | News24
Kushiswe izimboni kubhikisha umphakathi
Ababhikishi bashise izimboni kanye namaloli kwaSithebe ngoMsombuluko.x
KUBOSHWE abantu abanga phezulu kuka-100 ngoMsombuluko ngamacala okudala udlame emphakathini endaweni yakwaSithebe, eMandeni.
Ababhikishi kubikwa ukuthi bashise amaloli ayisithupha nezimboni baphinde bavala imigwaqo. Kuthiwa baqale ukubhikisha ngeSonto ebusuku.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Major Thulani Zwane uthe ababhikishi bakhononda ngokubekwa kuka Mnuz Lawrence Magwaza njenge mbangi yokuba yikhansela.
Uthe: “Kushiswe izimoto kanye nezakhiwo. Izimboni ezingaphezulu kwezine zishisiwe, kanye namaloli. Kuboshwe abasolwa abanga phezulu kuka-100 ngamacala okudala udlame emphakathini,” kusho yena.
Uqhube wathi amaphoyisa asEmpangeni, Ulundi kanye nawa seNewcastle athunyelwe eMandeni ukuzama ukunqanda isimo. Uthe amaphoyisa awazi sebenzisanga izinhlamvu zenjoloba. Uthe ababhikishi balimaze izimoto zamaphoyisa.
IMeya yaseMandeni, uMnuz Siphesihle Zulu uthe kuyadumaza ukuthi ababhikishi bashise izimoto kanye nezimboni kwaSithebe. Uthe lokhu kuphazamisa izimpilo zabantu abasebenzela kulendawo.
Uthe enye into ababhikishi abakhononde ngayo ukuthi abazifuni iziNduna ezimbili ezibekwe yInkosi esikhundleni seNduna uMasinga.
Ngeledlule umphakathi uvale imigwaqo engena kwaSithebe ufuna Induna uMasinga abuyiselwe esikhundleni sakhe.
Kubikwa ukuthi Induna uMasinga wasuswa esikhundleni sakhe ngonyaka odlule, iNkosi yabeka ezinye izinduna esikhundleni sakhe.
Umphakathi ukhononde ngendlela Induna uMasinga yasuswa ngayo esikhundleni sayo kanti futhi ukhale nangendlela iziNduna ezithathe isikhundla sakhe ezibekwe ngayo. Ngeledlule ababhikishi babekhala ngokuthi bafuna ukuzi khethela iNduna.
Usihlalo we-ANC esifundeni Greater KwaDukuza, uMnuz Ricardo Mthembu naye uthe iyadumaza indlela ababhikishi ababe nodlame ngayo.
Uthe umphakathi kumele ulandele uhlelo olufanelekile uma ufisa ukudlulisa izikhalazo, futhi uma ubhikisha ugweme ukuba nodlame.
Uqhube wathi abaholi bazohlangana nomphakathi kulo lelisonto ukuze kuzotholakala isixhazululo ngezikhalazo zabo.
UKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Lieutenant General Mmamonnye Ngobeni ugxeke ababhikishi ngokuba nodlame.
Uthe: “Angeke sibekezelele udlame oluba khona uma kubhikishwa. Umsebenzi wamaphoyisa ukuvikela impahla kanye nezimpilo zabantu uma kubhikishwa ngalendlela. Imphakathi ebhikisha ngaloluhlobo kumele yazi ukuthi izoboshwa,” kusho yena.